राशि अनुसार जान्नुहोस्, कुन व्यक्तिको प्रेम प्रतिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ? - Dainik Headlines
Home / Dharma / राशि अनुसार जान्नुहोस्, कुन व्यक्तिको प्रेम प्रतिको स्वभाव कस्तो हुन्छ ?
Dainik Headlines March 15, 2019	Dharma
मीन राशिका प्रेमी प्रेमिकाको स्वभाव माछाको जस्तो हुन्छ । यिनीहरु भावुक हुन्छन् र छिटो विपरित लिङ्गीप्रति आकर्षित हुन्छन् । प्रभाव पार्न सिपालु हुन्छन् तर यिनीहरुको प्रेम जीवनमा धेरै उतार चढाव आउँछ । बैबाहिक सम्बन्धमा गहिरो प्रेम हुन्छ ।-dainikonline
Previous अब पार्लर धाउनु पर्दैन, घरमै बसेर यसरी चम्काउनुहोस् अनुहार
Next बिना अप्रेशन पाइल्स रोगबाट छुटकारा पाउन अपनाउनुहोस् यि घरेलु उपाय